स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई एक मधेशी युवाको प्रश्न, जेष्ठ नागरिकका लागि कुनै सुविधा छैन ? | सहारा टाइम्स
Home » samaj » स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई एक मधेशी युवाको प्रश्न, जेष्ठ नागरिकका लागि कुनै सुविधा छैन ?
स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई एक मधेशी युवाको प्रश्न, जेष्ठ नागरिकका लागि कुनै सुविधा छैन ?
SAHARA TIMES Friday, September 9, 20160No comments
मन्त्री गगन थापाका लागि एउटा आमजनताको मनोभावना । धेरै अपेक्षित नेता गगन थापा स्वाश्थ्य मन्त्री भए । उनी मन्त्री नभएको बेला र भएपछि पनि ठूला ठूला कुरा दिदै आएका छन् तर सरकारी अस्पतालहरु के अवस्था छ सायद उहाँलाई थाहा छैन होला किनभने उनी कहिले कुनै अस्पताल पिडितसँग भेट्नु भाको छैन होला या अस्पताल कहिल्यै जानु भाको छैन होला या गए पनि उनलाई नेता भएकै कारण स्पेशल व्यवहार भइहालेको होला ।
एकपल्ट उनी कुनै गरिब र मध्यमवर्गी पिडित परिवारसँग भेटोस् अनि थाहा हुन्छ अस्पतालको वास्तविक अवस्था ।
मेरी आमा दुई महिनादेखि अस्पतालमा भर्ना हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म डाइगनोसिस नै भइरहेछ र यसकै नाममा लाखौ खर्च भइसकेको छ तर अवस्था अझ बिग्रिदै गईहेको छ । उहाँ जेष्ठ नेपाली नागरिक र एकल महिला हुनुहुन्छ तर अस्पतालले कुनै खासै सहयोग गरेको छैन । के यो देशको अस्पतालमा जेष्ठ नागरिकको लागि कुनै सुबिधा छैन ?
हो हुन पनि काहाबाट होस् सबै आम नागरिकको पसिनाको कमाई त नेताहरुकै भरण पोशण र इलाजमा खर्चिदा रहेछन् । युवा नेता हो तिमि समयमै सोच र गरिब जनताका लागि पनि भर्पर्दो इलाजको व्यबस्था गर नत्र भने आम जनताको लागि पनि विदेशमा इलाज गर्ने व्यवस्थ मिलाऊ ।